Okamaskandi wexwayiswe ngokungcwekisana nabasakazi - Ilanga News
Home Izindaba Okamaskandi wexwayiswe ngokungcwekisana nabasakazi
Okamaskandi wexwayiswe ngokungcwekisana nabasakazi
KUSUKELA kwesobunxele nguTshatha, uNkz Zandile Tembe ongumphathi wezinhlelo emsakazweni,
iGcokama Elisha, uZimiphi “Zimdollar” Biyela, umphathi wesiteshi, uNkz Sbongi Ngcobo noMnu Simphiwe Masondo osebenzisana neGcokama.
UDONSWE ngendlebe umculi kamasikandi uMthandeni “iGcokama Elisha” Manqele kwathiwa makayeke ukuhlasela abasakazi ezingomeni zakhe.
Kuthiwa utshelwe lokhu ngoMsombuluko emhlanganweni obusezindlini zomsakazo oKhozini FM, eThekwini njengoba ebeyoshweleza, ecela ukubuyisa-na noKhathide “Tshathugodo” Ngobe njengoba bese kunokungahoshelani okusolwa kubona.
Ngokuthola kweLANGA, abaphathi boKhozi bathe kawukho umhlangano ofana nalona abayophinde babe nawo nalo mculi futhi sebenele ngabaculi abacela uxolo.
ILANGA lihabule ukuthi ngesikhathi lizisola iGcokama, lithe empeleni lalimncokolisa lo msakazi kwi-albhamu yalo ephume ngoZibandlela (December) nyakenye ethi “Iskorokoro Sami,” lalingahlosile impi.
Kule albhamu kunengoma ethi “Ubugunqugunqu” enezinhlamvu ezithi “UTshatha ube-right, wadla i-breakfast noMgodi (uKhuzani “iNdlamlenze” Mpungose) usemise okwempisi manje, umise okuka-carrot into engeke isalungiseka”.
Le nkulumo kuthiwa kayizange yehle kahle kuTshatha. Emuva kwale ngxabano, iGcokama laphumela obala lathi uTshatha uthanda ukugida noKhuzani esiteji kube sengathi bebezilungiselela ndawonye, okuyinto elayichaza njengokuchema.
Leli phephandaba lizwe ngomthombo walo ukuthi bekushubile kulo mhlangano woxolo, kugeqwa amagula. “Utsheliwe ukuthi makangcweke nabangani bakhe, hhayi abasakazi ngoba bakhulu kuyena ngokomsebenzi futhi kabasibona ontanga yakhe, bafana nothishanhloko kuyena,” kusho umthombo.
Kuthiwa utsheliwe nokuthi uma kuke kwenzeka into enjena, kuyobe kusho ukuthi isigezelene. Ngokuthola kweLANGA, kuvela nezithi abaphathi boKhozi balitshelile iGcokama ukuthi ngeke emsakazweni kudlalwe umculo womuntu othuka isisebenzi salo msakazo ngoba kusuke kuthunazeka negama lawo.
IGcokama ligcine selicela abaphathi besiteshi ukuba balihlanganise noTshatha emuva kokuba kuthiwa lizamile nokuxhumana nezihlobo zakhe (uTshatha) kodwa lafana nephisi eliphume inqina kamabuyaze.
NgoMsombuluko liqophe i-video lithi lisemsakazweni beliyoxolisa kuTshatha lapha nalaphaya okwakonakele khona. Likuvezile ukuthi sebeyilungisile indaba yabo.
Ephawula ngalokhu uTshatha kwiLANGA, uthe isenzo seGcokama simgculise kakhulu ngoba bekungakaze kube khona ukungaboni ngaso linye phakathi kwabo phambilini. “Sasizwana kabi, kasikaze singaboni ngaso linye, kwangimangaza-ke ukuzwa ngengoma nje, esekhwela phezu kwami.
“Ukuxolisa kwakhe ngikwamukelile futhi ngakudlulisa ukudinwa ebenginakho. Uma umuntu ezehlisa, exolisa kodwa wena uqhubeke negqubu, usuke usunecala kuNkulunkulu ngoba lithi iBhayibheli masibathethelele abasonayo ukuze nathi uNkulunkulu ezosithethelela eziphambekweni zethu,” kusho uTshatha.
Previous articleowesibaya nethemba lokuheha ababukeli ngendawo ayidlalayo
Next articlesekushone abantu ababili ngosomqhele (coronavirus)